Mahomby ny Marketing App Push
Alakamisy Febroary 6, 2014 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Araka ny voalazan'ny Responsys 'SVP an'ny fantsom-pivoarana Michael Della Penna, amin'ny taona 2020 dia hisy Fitaovana 75 miliara mifandray amin'ny Internet-javatra. Tsy olona ity… ny tranontsika, ny fiara misy antsika, ny lampihazo misy antsika ary na ny fitaovantsika ara-pahasalamana aza dia samy mamolavola fampiharana finday sy takelaka feno miaraka fanindriana fampandrenesana.
Vao haingana ny Responsys dia nanadihady momba ny marketing an-tariby ho an'ny mpanjifa amerikana 1,200 ary nahita fa ny 68 isan-jaton'ny mpanjifa izay nampidina rindrambaiko no nahatonga izany fampandrenesana izany. Eo amin'ireo mpanjifa tanora kokoa (18-34 taona) dia efa ho 80 isan-jato izany. Araka ny hitanao eo amin'ny sary eto ambany, ny tsindry dia fantsona iray izay tsy tokony tsy raharahian'ny mpivarotra.
Raha ny olana dia toy ny mailaka ihany koa ny fomba hampiasan'ny mpivarotra am-pahendrena marketing marketing. Raha toa ka tsy misy lanjany ho an'ny mpampiasa ireo fampandrenesana fanosehana dia hovonoin'izy ireo izany. Mahatsiaro ho lasa mahazatra be aho. Nipetraka nandritra ny adiny iray aho ary nanalavitra ny ankamaroan'ny rindranasa izay nandefa fampandrenesana fanindriana tamiko… tsy dia nisy lanjany loatra hanakanana azy ireo.
Tags: Michael Della PennaFivarotana finday sy tablettefinday-barotrahanotomanosika marketingvaliny
Socialbungy: ny sehatry ny varotra ataon'ny mpiara-miasa aminao